नौजवानलाई परदेश पठाएर ‘लास’ बुझिरहेछ सरकार : विदेशिएका कतिकाे मृत्यु र अंगभंग भयाे ? कहालीलाग्दो कथा ! (भिडियाे) « News24 : Premium News Channel
नौजवानलाई परदेश पठाएर ‘लास’ बुझिरहेछ सरकार : विदेशिएका कतिकाे मृत्यु र अंगभंग भयाे ? कहालीलाग्दो कथा ! (भिडियाे)
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका कारण भित्रने रेमिट्यान्समा सरकार मख्ख परिरहेको छ । र, वैदेशिक रोजगारीलाई अझ बढाउने योजनाका साथ अघि बढिरहेको छ । तर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारीस्तरबाट प्रभावकारी पहल भएको छैन ।
अहिले दैनिक ३ वटाका दरले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको शव नेपाल ल्याउने गरिएको तथ्यांक छ । रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका युवाको मृत्यु र घाइते भएकाको तथ्यांक भयावह छ । र, उक्त तथ्यांक वर्सेनि बढ्दो छ ।
कुन वर्ष कति विदेशिए, कतिकाे मृत्यु र अंगभंग भयाे ?
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको मृत्यु विभिन्न कारणले हुने गरेको छ । धैजसो मृत्यु कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनाको कारण हुने गरेको छ भने कतिपय सुतेकै अवस्थामा मृत फेला परेका छन् । त्यस्तै कसैले आत्महत्या गरेका छन् त कसैको हत्या भएको छ । नेपाली युवा बढी जाने देशमा २०६५ सालयता मृत्यु भएको तथ्यांक यस्तो छ ।
कुन देशमा कति महिला र पुरुषकाे मृत्यु भयाे ?
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जानेको सङ्ख्या धेरै छ । त्यसै रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएका धेरै युवाहरूको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । रोजगारीका लागि मलेसिया गएका दुई हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने अहिलेसम्म सबै देशमा गरेर हजार भन्दा बढी मृत्यु भइसकेको छ । रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्केका युवाको सङ्ख्या पनि धेरै छ । कामको सिलसिलामा घाइते भएकाहरू उपचार गर्न नसकेर स्वदेश फर्कने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन विभागको तथ्याङ्कअनुसार अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएर स्वदेश फर्केका नेपाली युवाको सङ्या यस्तो छ ।
कुन देशमा कति महिला र पुरुषकाे अंगभंग भयाे ?
तथ्यांक नै बोल्छ, रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली युवाको अवस्था कति जर्जर छ । सरकार रेमिट्यान्समा मख्ख पर्छ, तर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न पहल गर्दैन । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दा युवालाई विदेश धपाउनुमै सरकारले मज्जा मानिरहेको छ । दैनिक ३ युवाको शव बाकसमा आएको नदेखेर दुई/चार हजार पैसामा रमाइरहेको छ, सरकार । नौजवना विदेश लखेटेर र उनीहरुको शव बुझ्दै समृद्धिको नसुहाउँदो भाषण गरिरहेछ हाम्रो सरकार ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेशिन वाध्य नेपाली नौजवानको स्थिति अतिदर्दनाक छ । विदेशी भूमिमा रगत -पसिना बेचेर दुईचार हजार कमाउन गएका नौजनाको औसत दैनिक ३ वटाका दरले शव आइरहेको छ । त्यस्तै घाइते भएर फर्कनेको सङ्ख्या पनि त्यतिकै छ । कति विदेशको जेलमा छट्पटराइरहेका छन् त कति आप्रवासी शिविरमा तडिपरहेका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा ३८ लाख ९८ हजार ४ सय ७९ जना युवा रोजगारीका लागि विदेश गएका गए । तिमध्ये ६ हजार ७ सय ८ जनाको विदेशमै मृत्यु भयो । यो त वैदेशि रोजगार विभागमा भएको आधिकारिक तथ्यांक हो । यो सङ्ख्या बढी हुनसक्ने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
भिडियाेमा कहालीलाग्दो कथा !
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको मृत्यु विभिन्न कारणले हुने गरेको छ । अधिकांश मुत्युको कारण कार्यस्थलको भएको दुर्घटना हो । त्यस्तै कतिको सडक दुर्घटना त कतिको सुतेकै ठाउँमा मृत्यु भएको तथ्यांक छ । विदेशमा नेपाली युवाको मृत्यु हुने क्रम बढेपनि सरकारी निकाय यसप्रति जिम्मेवार बन्न सकेको छैन ।
काम गर्न विदेशमा गएका धेरै नेपाली घाइते भएर फर्किएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश गएका एक हजार भन्दा बढी युवा अंगभंग भएर स्वदेश फर्केका छन् । आवश्यक ज्ञानसीपबिनै विदेश पठाइँदा उनीहरु अहिले कठिन दैनिकी विताउँन वाध्य छन् ।
सीप र दक्षताबिना नै काम गर्न विदेश जानुपर्ने नेपाली युवाको वाध्यता हो । कामका लागि विदेशै पाठाए पनि दक्ष बनाएर पठाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यस्तै, बिमालगायत अन्य सुरक्षाका विषयमा सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्न भन्दा बढाउनै सक्रिय भएको सरकारले सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।